Waaciye: Xarun la dhagax dhigey
21 Dec 21, 2012 - 10:57:17 AM
Wasiirada Haweenka iyo Arrimaha Qoyska Puntland Marwo
Xaliimo Xasan Xaaji iyo wafdi ay horkaceyso ayaa booqasho maanta 21
December,2012 ku tagay Degmada Waaciye ee gobolka Karkaar.
Wasiir ku xigeenka Haweenka Caasho Maxamed Axmed iyo hawlwadeenada
wasaarada haweenka ayaa la socdey wasiirada oo dhagax dhigtey xarunta haweenka
ee degmada Waaciye,
Kulan ayaa wasiiradu waxay la yeelatay intaasi ka dib
haweenka Waaciye oo ku saabsan sidii loo xoojin lahaa wada shaqeynta haweenka
iyo ka qayb qaadashada baraamijta horumarineed.
Waxa jirtey baahiyo iyo cabashooyin ay soo jeediyeen
haweenka deegaanku oo dhankeeda wasiiradu balan qaadey in sida ugu dhakhso
badan ay wax uga qaban doonaan.
Wasiirada iyo wafdigeeda ayaa markii kormeerka u soo
dhaamdey waxay u gudbeen dhanka magaala madaxda Puntland ee Garowe oo
dhowaanahn ay safaro shaqo uga maqneyd.
Ciidanka Jubba oo Alshabab dilay